नेपालले गर्यो सिरिजमा १-१ को बराबरी
आई सी सी एकेडेमी दुबईमा भएको दोस्रो टि २० खेलमा नेपालले ६ विकेटको जित निकाल्दै सिरिजमा बराबरी गरेको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिंग गर्ने निर्यणय गरेको यू ए ई ले १९.२ ओभरमा आफ्नो सबै विकेट गुमाउदै १०७ रन बनाएको थियो । सोमपाल कामी, कारण केसी र सन्दिप लामिछानेले समान २-२ विकेट र अभिनाश बोहराले ३ विकेट लिदै यू ए ईका खेलाडीहरुलाई खुलेर खेल्ने मौका दिएनन् र कम रनमा सबै टिमलाई समेट्न सफल रहे ।
यू ए ईका सिपि रिवाज बाहेक अरु खेलाडीहरुले खासै राम्रो प्रदशन गर्न सकेनन् । यू ए ईका ७ जना खेलाडीहरुले व्यक्तिगत ७ रनको आकडा पनि पार गर्न भने सकेनन् ।यू ए ईका सिपि रिवाजले एक्लै ४३ बलको सामना गरि ४४ रनको योगदान दिए र टिमलाई एउटा सम्मान जनक स्कोर मा पुर्याए ।
१०८ रनको लक्ष्य पछ्याउन मैदानमा ओर्लिएका नेपलको सुरुवात भने राम्रो रहेन । इन्निङ्गको दोस्रो बलमै कप्तान पारस खड्का ० रनमै आउट भएपछि नेपालको विकेटको पतन सुरु भएको हो । १०.१ ओभरमा ४६ रनको स्तिथि नेपालले आफ्नो प्रारम्भिक ५ विकेट गुमाईसकेको थियो ।
यस्तोमा दिपेन्द्र सिंह एरि र पवन सराफले ५५ रनको महोत्पुर्ण साझेदारी गर्दै टिमलाई जित तर्फ लागेका थिए । दिपेन्द्र सिंह एरिले सर्बाधिक ४७ रन बनाएका थिए भने पवन सराफले १८ रन बनाउदै एरीलाई साथ दिएका थिए । नेपालले १९.३ ओभरमा ६ विकेट गुमाउदै आफ्नो लक्ष्य भेट़ाउन सफल भयो ।यू ए ईका सुल्तान अहेमदले २ विकेट लिए भने मोहम्मद नावेद, अमिर हायत,इमरान हैदर र ज़हूर खानले समान १-१ विकेट लिएका थिए ।
यू ए ई संगको पहिलो टि २० खेलमा नेपालको हार
नेपालले गर्यो टि 20 सृंखलामा कब्जा
Greatest English Over the internet Betting establishment Offers
Greatest English Over the internet Betting establishment Offers Just simply it’s very good for getting the majority source of income regarding carrying out nothing at all? A fantastic increasing volume…
Will you be Up For It? Whether you’re currently dating just one dad or get places on some guy with k
A good Guide book In order to Cell phone On-line poker-online Games
Fintech Nimble will leave its high interest, short term installment loans company in 2010 at the same time